Ihe edemede Scott Hardigree na Martech Zone |
Edemede site na Scott Hardigree
Mmetụta abụghịzi naanị ngalaba nke nnukwu ndị nkwusa. A na-emegharị eyeballs na dollar ahịa ka ọ bụrụ ndị agha nke obere, ndị nkwusa niche; bụrụ ndị na-elekọta ọdịnaya, ndị na-ede blọgụ, vloggers, ma ọ bụ pọdkastị. N'iburu onu ogugu ndi a, ndi oru nta-akuko a na-acho uzo ha ga-esi jiri uche ha rite uru n'aka ndi na ege ha nti, na mgbali ha Erite uru na Akwụkwọ Akụkọ Email yana ndị ọzọ na usoro ntinye ego ha na-eji ugbu a, dịka ngosipụta ngosipụta webụsaịtị na nkwado mgbasa ozi mmekọrịta, ọpụrụiche nke taa
Otu uru dị na ibi ndụ na iku ume niche ụlọ ọrụ, dị ka ị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ email, bụ na ọ na-enye mmadụ ohere ịtụgharị uche n'ihe ọdịnihu nwere ike ịbụ. Ihe ndị a bụ ọdịnihu nke ọhụụ ahịa email ga-adị ka afọ 2017 maka ndị na-eme ọrụ, ndị ahịa na ndị ahịa. Aha nke Egwuregwu Agbanwe Agbanwe Ọsọ ọsọ na-aga n'ihu afọ isii na okwu ahụ bụ "ahịa email" apụla n'anya n'asụsụ anyị kpamkpam. Ọ bụ ezie na ala
Ime ka a bụrụ maka Outsourcing Email Marketing
Maka ndị na-ere ahịa chọrọ ịmịkwuo ọlaedo site na mmemme email ha; ọpụpụ email na-apụta ngwa ngwa na-ewu ewu. Ha na-achọ ọrụ ịre ahịa email jisiri ike n'ihi na ha nwere nkụda mmụọ na enweghị ego. Ndi outsourcing email email gi na-eme ka dollar na uche gi?
Ruo ugbu a, amalitela m (ma emechabeghị) ọtụtụ atụmatụ azụmahịa mara mma. Ya mere, m na-ejikarị nku nku ya were “atụmatụ azụmahịa”, mana ọ ga-adị m ka nzuzo m wepụta oge wee depụta usoro m ogologo na usoro dị mkpirikpi. Yabụ oge a, emepụtara m atụmatụ azụmaahịa a na-ahụ anya.
Ndị na-ahụ maka ịre ahịa email n'ozuzu ha na-ewere ụdị atọ; ha niile nwere nkà na ahụmịhe ndị akọwapụtara iji zụlite usoro azụmaahịa email dị irè. Agbanyeghị, isi ikike ha na onyinye ha dịgasị iche iche. Yabụ ịchọrọ onye ndụmọdụ email? Ọ bụrụ otú ahụ, olee ụdị? Jụọ onwe gị ajụjụ ndị a.
Wenezdee, Machị 24, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Scott Hardigree
A na-ekwutọkarị ya ma na-aghọtahiekarị, mgbazinye ndepụta email bụ omume ahịa a na-anabata nke nwere ike inye ROI siri ike, ma ọ bụrụ na ị maara ihe ị ga-achọ ma kwanyere igbe ozi. Ọ bụrụ na ị maghị ma ọ bụ na-enweghị mmasị na ịgbazite ndepụta email, nke a bụ uru dị ala yana uru ya na isi ihe dị iche.
A ahịa email ahịa omume dị ka a n'ezie manụ ahịa ahịa, ma na obere mgbalị na ọtụtụ nke onwe ị nwere ike gbanwee email gị ahịa n'elu-emeputa. Nke kachasị mma, ọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala ịme.
Na akụkụ otu (M nwere ike ịchọ ọkachamara n'ịre ahịa Email If Ugbu a, anyị ga-egosipụta ụkpụrụ nduzi ị ga-atụle tupu i goro ụlọ ọrụ na-ere ahịa email, onye na-ahụ maka ịre ahịa email ma ọ bụ onye njikwa ụlọ ahịa email.